တရုတ်အပြည့်အဝအလိုအလျောက်ဗီဒီယိုအချောဆီအရည်ပျော်မှတ်မီတာထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Jiahang တူရိယာများ
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > အရည်ပျော်မှတ်မီတာ > အလိုအလျောက်အရည်ပျော်မှတ်စက် > Fully Automatic Video Grease Melting Point Meter သည်
SNT0801.5-2015, GB/T24892-2010, GBT127662008 စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ The JH90 Fully Automatic Video Grease Melting Point Meter သည် high-precision temperature control technology နှင့် high-definition video camera နည်းပညာကိုစုံလင်စွာပေါင်းစပ်ထားသည်။ ၎င်းသည်သုံးစွဲသူများအားတိကျ၊ တည်ငြိမ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောစမ်းသပ်မှုရလဒ်များပေးရုံသာမကသုံးစွဲသူများအားထိရောက်အဆင်ပြေသောစမ်းသပ်မှုအတွေ့အကြုံကိုပေးသည်။ high-definition video သည်နမူနာအရည်ပျော်ခြင်းဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးကိုလွယ်ကူရှင်းလင်းစွာမြင်နိုင်ပြီးအလိုအလျောက်ထောက်လှမ်းခြင်း၏အချိန်မှန်ရောင်စဉ်ပြသခြင်းသည်အသုံးပြုသူများအားအရည်ပျော်မှတ်နှင့်နမူနာအရည်ပျော်အကွာအဝေးကိုတိကျစွာတိုင်းတာရန်အဆင်ပြေသည်။
SNT0801.5-2015, GB/T24892-2010, GBT127662008 စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ
JH90 Fully Automatic Video Grease Melting Point Meter သည်တိကျသောအပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုနည်းပညာနှင့် high-definition video camera နည်းပညာကိုစုံလင်စွာပေါင်းစပ်ထားသည်။ ၎င်းသည်သုံးစွဲသူများအားတိကျ၊ တည်ငြိမ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောစမ်းသပ်မှုရလဒ်များပေးရုံသာမကသုံးစွဲသူများအားထိရောက်အဆင်ပြေသောစမ်းသပ်မှုအတွေ့အကြုံကိုပေးသည်။ high-definition video သည်နမူနာအရည်ပျော်ခြင်းဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးကိုလွယ်ကူရှင်းလင်းစွာမြင်နိုင်ပြီးအလိုအလျောက်ထောက်လှမ်းခြင်း၏အချိန်မှန်ရောင်စဉ်ပြသခြင်းသည်အသုံးပြုသူများအားအရည်ပျော်မှတ်နှင့်နမူနာအရည်ပျော်အကွာအဝေးကိုတိကျစွာတိုင်းတာရန်အဆင်ပြေသည်။
1. Fully Automatic Video Grease Melting Point Meter မိတ်ဆက်
1: အပြည့်အဝအလိုအလျောက်ဗီဒီယိုအဆီအရည်ပျော်မှတ်မီတာကိုရိုးရာအဏုကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့် HD ဗီဒီယိုကိုသုံးပါ။
၂: တစ်ကြိမ်တွင်နမူနာ ၄ ခုကိုလုပ်ဆောင်ပါ။
၃: အဆင့်မြင့်အလိုအလျောက်ပေါင်းစည်းမှု၊ တစ် ဦး တည်းတိုင်းတာမှုလုပ်ဆောင်ချက်ကိုနားလည်သည်။
6: high-definition ကင်မရာမှန်ဘီလူး module ကိုတပ်ဆင်ထားသည်။
2. Fully Automatic Video Grease Melting Point Meter Parameter သည်
အပူချိန်အပိုင်း -အခန်းအပူချိန် -420 âƒ
ထောက်လှမ်းရေးနည်းလမ်း: အပြည့်အဝအလိုအလျောက် (လက်စွဲစာအုပ်နှင့်တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည်)
လုပ်ဆောင်နိုင်မှုစွမ်းရည် - အပိုင်း ၄ ပိုင်း/အသုတ် (နမူနာလေးမျိုးကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းပြုလုပ်နိုင်သည်)
အပူချိန်ဖြေရှင်းချက်: 0.1â„ ƒ
အပူနှုန်း-0.1â„ ƒ-20â„ ƒ (ခြေလှမ်း ၂၀၀ ကို steplesslyly ချိန်ညှိ)
တိကျမှု: ± 0.3 ° C (<250 ° C)
± 0.5 ° C (> 250 ° C)
Repeatability: 0.1â„ Min/Min ±0.1â„ Mel တွင်အရည်ပျော်မှတ်ပြန်လုပ်နိုင်ခြင်း
ဗွီဒီယိုလုပ်ဆောင်ချက် - ဓာတ်ပုံ၊ ဗွီဒီယိုရိုက်ပါ
အသုံးပြုသူစီမံခန့်ခွဲမှုအရေအတွက် - ၂၀
Atlas သိုလှောင်မှုပမာဏ ၈၀
ဒေတာချွေတာမှုရလဒ် - ၁၀၀၀
စမ်းသပ်အစီအစဉ် - အစုံ ၁၀၀
ဗွီဒီယိုသိုလှောင်မှုပမာဏ - ၃၂G (မြန်နှုန်းမြင့်မြန်နှုန်းမြင့်)
ပြသမှုပုံစံ-TFT high-definition true color screen
ဒေတာ interface: USB RS232 network port
သွေးကြောမျှင်အရွယ်အစား၊ အပြင်အချင်း† mm ၁.၄ မီလီမီတာ၊ အတွင်းအချင်းÏ† ၁.၀ မီလီမီတာ၊
ပါဝါ: 220V 50HZ ပါဝါ: 120W
3. Fully Automatic Video Grease Melting Point Meter ၏အင်္ဂါရပ်
၁: အအေးခန်းစနစ်ဖြင့်နမူနာ ၃ ခုကိုတစ်ကြိမ်တည်းစီမံနိုင်သည်။
3: PID တိကျသောအပူချိန်ထိန်းချုပ်မှု;
5: အမျိုးသားစံချိန်စံညွှန်းနှင့် ISO ဆီအရည်ပျော်မှတ်မှတ်ဆုံးဖြတ်ခြင်းနည်းလမ်းနှင့်အပြည့်အ ၀ လိုက်နာမှု
Fully Automatic Video Grease Melting Point Meter သည်ဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုတေသနတွင်အရေးပါသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အစားအစာ၊ ဆေးဝါး၊ နံ့သာမျိုး၊ ဆိုးဆေးများနှင့်အခြားအော်ဂဲနစ် crystal ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
Fully Automatic Video Grease Melting Point Meter သည်အမျိုးမျိုးသော block များနှင့်နမူနာများ၏အရည်ပျော်မှတ်ကိုလျင်မြန်တိကျစွာဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ နမူနာ ၃ ခုကိုတစ်ပြိုင်နက်တိုင်းတာနိုင်သည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ် optical အာရုံခံကိရိယာအားဖြင့်စမ်းသပ်မှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးကိုဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်နှင့်ကွန်ပျူတာသို့ပို့သည်၊ အသိဥာဏ်ရှိသောဆော့ဝဲသည်အဆီ၏အရည်ပျော်မှတ်ကိုအလိုအလျောက်ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်သည်၊ အရည်ပျော်မှတ်ကိုဆုံးဖြတ်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအမှားကိုဖယ်ရှားပေးပြီးစမ်းသပ်သူ၏လုပ်အားကိုလျှော့ချပေးနိုင်သည်။
Jiahang Fully Automatic Video Grease Melting Point Meter သည် CE အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်၊ TART အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်၊ ISO အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်၊ ဆော့ဝဲမူပိုင်ခွင့် ၁၀ ခုနှင့်မူပိုင်ခွင့်များစွာကျော်ကိုရရှိရန်အတွက်မူပိုင်ခွင့်များစွာရရှိထားသည်။
မေး: မင်းကုမ္ပဏီက Fully Automatic Video Grease Melting Point Meter Feature ကိုမင်းကုမ္ပဏီမှာလုပ်နေတာဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီလဲ။
hot Tags:: အပြည့်အဝအလိုအလျောက်ဗီဒီယိုချောဆီအရည်ပျော်မှတ်မီတာ၊ တရုတ်၊ စက်ရုံ၊ စျေးပေါ၊ အဆင့်မြင့်၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စျေး၊ CE
Melting Point စမ်းသပ်သူ
Capillary Melting Point စက်ပစ္စည်း
ချွေတာသောဗီဒီယို Melting Point စက်ပစ္စည်း